Mareykanka: Waqti lama hayo, waa in hadda la kulmaa | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ku amartay Madaxda Maamul Goboleedyada dalka iyo Farmaajo inay qabtaan shir deg deg ah, oo lagu dhameystirayo heshiiska doorashooyinka.
"Waqtiga waa uu sii dhamaanayaa, waxaana ugu baaqeynaa Madaxda DF iyo Maamullada inay hadda kulmaan, oo ay ku heshiiyaan wax dan u ah shacabka Soomaaliyeed, sidoo kalena la dhameystiraa heshiiska doorashadda," ayaa lagu yiri qoraal bogga Safaaradda Mareykanka lasoo geliyay.
Hadalkan hanjabaadda ah ayaa yimid kadib markii Wakiiladda Beesha Caalamka ay maanta soo dhaweeyeen heshiiskii Rooble iyo Mushariixinta oo shalay lagu gaarey decale hotel, kaasoo lagu dhisay labo gudi oo wadajir ah, kuwaasoo ka shaqeynaya banaanbaxa musharixiinta iyo baaritaanka dhacdadii 19-kii Febraayo.
Safaaradda Mareykanka ayaa luuqad adag kula hadashay Madaxda Soomaalida, iyadoo ka faa'idaysanaysa dowlad xumada dalka haysato, oo Safaaradda ajnabi ah faragelinayso arrimihiisa gudaha iyo doorashooyinkiisa.
Safaaradaha Caalamka ee ku yaalla Washington kama hadli karaan arrimaha gudaha iyo doorashooyinka Mareykanka, waayo waxay jebinayaan xeerarka caalamiga ah ee ilaalinta dalalka madaxbanaanidooda siyaasadeed iyo tan dhuleed.